Kodwa le ncwadi ovuthiwe. It uyayazisa avuthiwe. It ihlonipha yobudala. Trip ihlakaniphe ukudlula iminyaka yakhe. ubona…
Unkulunkulu kuphela ongangahlulela?
Ngiyakuthanda ngokuxoxa intando kaNkulunkulu ngoba ukuphila kwethu, ngisho nalapho umuntu engavumelani nami ngakho. Izingxoxo angathola esishubile real real esheshayo noma-ikakhulukazi uma thina ukhuluma mayelana nezindaba impikiswano. It’s never fun...
Kungani ngashada White Girl
Noma nini lapho ngi- post izithombe umndeni wami zokuxhumana, responses zihlale fun. I ezivamile, "Indodana yakho kuyinto handsome kangaka!"Noma" Yini umkhaya omuhle!” But one of the...
Ingabe ekubeni umKristu asho ekupheleni fun yami? Umbuzo ezithakazelisayo futhi ngicabanga kwakuyiqiniso ukubuza. Kukhona isithombe ethile ubuKristu ezinga ngokuvamile ngesineke. When people...
5 Izingibe Zokufihla Ukuthi Social Media
iposi Guest kusukela Jessica Barefield Mangiqale ngokunikeza nesitatimende. Lesi sihloko akukhona mayelana nendlela media okubi yezenhlalakahle. Asetshenziswa ngokulinganisela, nangesimo senhliziyo ukuma, it can be...
Yini Doesnt ukungibulala
Uma ubhekene nesikhathi kanzima, abantu musa njalo bazi ukuthi yini okufanele bayisho. Umphumela uba clichés leze noma imizamo trite ukuze ujabule. I’ve always had a problem with cliché...
Uneminyaka ngakhethi Enough
Njalo manje bese Ngizoxoxa umuntu othi bafuna ukuba umKristu, kodwa babonakala becabanga isikhathi okungahambi kahle. Lapho ngimbuza ukuthi kungani, they tell...
Ukufundisa Trip Lee
Ukudlala abezindaba uzodinga noma uvuselele i-browser yakho inguqulo yamuva noma uvuselele wakho Flash plugin.
Igama	 imeyili	 Zip
Thola Up Uphile eNdabeni kaNkulunkulu Great